တရုတ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသတွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါပပျောက်ရေးဆောင်ရွက်မှုများ - Xinhua News Agency
ယူနန်၊ နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်သည် နယ်နိမိတ်မျဉ်းတစ်လျှောက် ကီလိုမီတာ စုစုပေါင်း ၄,၀၆၀ ရှိသည်။ ယူနန် ပြည်နယ်တွင် နယ်စပ်မှတစ်ဆင့် COVID-19 ကူးစက်မှုများကို ဦးစွာ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ ထိုဒေသတွင် ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှ ဝန်ထမ်းပေါင်း ၁၅၃,၀၀၀ ဦးကို နယ်စပ်ဒေသစောင့်ကြပ်ရန်နှင့်ပြည်သူများ၏ အသက်အိုးအိမ်များကိုစောင့်ကြပ်ရန်တာဝန်ချထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
GLOBALink | Fighting against COVID-19 in Chinese border province
Yunnan,aChinese border province, hasa4,060-km-long borderline. It is at the forefront of the fight against cross-border spread of COVID-19. Here, 153,000 people from all walks of life unite as one to guard the boundary. Produced by Xinhua Global Service